Ciidamada DF iyo Al Shabaab oo ku dagaalamay Gobolka Hiiraan | Baydhabo Online
Ciidamada DF iyo Al Shabaab oo ku dagaalamay Gobolka Hiiraan
Wararka aynu ka heleyno deegaanada Gacanlaw iyo Ceeldheere oo qiyaas ahaan 40 kmu jira Magaalada Baladweyne ayaa waxa ay tilmaamayaan in inta u dhexeysa labadaasi deegaan uu saacado ka hor dagaal xoogan ka dhacay.
Dagaalka ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii Dagaalyahanada Al Shabaab ay soo weerareen Ciidamo kuwa dowladda Federaalka ka tirsan oo ku sugan inta u dhexeysa Gacanlaw iyo Ceeldheere ee Gobolka Hiiraan.
Labada dhinac ayaa waxaa dhex maray dagaal khasaaro saababay walow aan la cayimin xaddiga ka dhashay.
Ilo wareedyo ku sugan meesha wax ka dhaceen ayaa Shabelle u xaqiijiyay in labada dhinac ay isweedaarsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan iyadoo si weyn ay dadka deegaanadaasi u maqlayeen daryanka hubka la isweedaarsanayay.
Col Maxamed Cumar Cabdulle Abaanduulaha Ciidanka dowladda ee Gobolka Hiiraan oo Shabelle uga warbixiyay dagaalkaas ayaa meesha ka saaray in dhankooda u jiro khasaaro soo gaaray balse dhinaca Al Shabaab tilmaamay in ay khasaaro gaarsiiyeen.
Hase ahaatee ma cayimin xaddiga khasaarahaas uu sheegay in Al Shabaab ay ku gaarsiiyeen dagaalka maanta ka dhacay Gobolka Hiiraan.
Al Shabaab dhankooda weli kama hadlin dagaalkaasi maanta dagaalamayaashooda iyo Ciidanka dowladda ku dhexmaray Gobolka Hiiraan.